Bogga ugu weyn Maxay Dadku Sabool U Ahaadaan
Saboolnimadu aad bay dadka u neceb yihiin laakiin waa nasiib darro in la necbaado macnaheedu maaha inaysan kuu iman karin.
Si aad u soo baxdo oo aad ugu guuleysato dagaalka ka dhanka ah saboolnimada, waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqantid xalalka ku taxan maqaalkan. Daawooyinkan ayaa ah kuwa hodanka ah ay ku dhaqmayaan waqti ka dib taas oo ka dhigtay hodan waxayna sidoo kale siiyeen maalkooda.
Haddaba, nala joog!
Waxaa jira aragtiyo badan oo ku saabsan sababta dadku sabool u yihiin laakiin waxaa jira laba aragtiyood oo ballaaran oo ku saabsan sababta saboolnimada loo heli karo. Midda koowaad waxay xoogga saareysaa doorka aasaaska dhaqaalaha-tusaale ahaan, farqiga u dhexeeya astaamaha shaqsiyeed sida hibada ama dhiirrigelinta ayaa ka dhigaysa kuwa liita inay doortaan shaqooyinka wax soo saarka hooseeya. Midda labaad waa aragtida dabinnada saboolnimada taas oo xoogga saareysa helitaanka fursadaha ku xiran hodanka hore sidaas darteedna dadka saboolka ahi waxay cuneen wax kale oo aan ka ahayn inay ka shaqeeyaan shaqooyin wax soo saar oo hooseeya.
Dadka Saboolka Ah Miyuu Noqonayaa Mid Sabool Ah?
Waa Maxay Sababaha Ku Haya Qoysaska Ugu Saboolsan Saboolnimada?
Maxay Saboolku Sabool U Ahaadaan?
Sideen Taajir Ugu Noqon Karaa?
Sababaha Dadku Saboolnimada U Joogaan
1. Uma Furan Barashada
2. Adkaysi La’aan
3. Doonista In Si Degdeg Ah Oo Fudud Loogu Taajiro
4. Dhaqan Xumo Dhaqaale
5. Ku Eedaynta Dadka Kale Dhaqaalahaaga Maaliyadeed
6. ilaalinta Shirkadda Qaladka ah
8. Himilooyin La'aan
10. Feejignaan la’aan
Su'aashan si kale haddii aan u dhigno micnaheedu waa in farqiga u dhexeeya taajiriinta iyo saboolka run ahaantii uu ballaarinayo, mise sinnaan la'aanta sii kordhaysa waa khuraafaad? Sida laga soo xigtay Andreas Peichl iyo Martin Ungerer, Xarunta Cilmi -baarista Dhaqaalaha Yurub (ZEW), Mannheim, dadka saboolka ah lama huraan inay sabool yihiin, laakiin taajiriintu runtii way sii hodan yihiin. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jiray horumarro taban oo la soo dhaafay oo la xiriira saboolnimada joogtada ah iyo sinnaan la'aanta dakhliga oo aan ka bixin kobaca shaqaalaynta ee hadda.
Waxaa jira dhowr sababood oo sababa in qoysaska ugu saboolsan adduunka ay ku dhegaan faqriga. Waxaa ka mid ah:
Sinnaan la’aan iyo is -faquuqid
Gaajo, nafaqo -xumo, iyo istaagid
Biyo nadiif ah, fayodhawr, iyo nadaafad ayaa aad u yar
Hawlaha guud iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo liita
La'aanta taageerada dowladda
Shaqo la'aan ama hab -nololeed
Dad badani ma rabaan inay sabool noqdaan, duruufaha iyo waxyaabaha u muuqda kuwa aan la xakamayn karin ayaa door weyn ku leh.
Bishii Abriil 1995, a doorashada waxaa soo abaabulay NBC News iyo the Wall Street Journal ayaa shaaca ka qaaday in boqolkiiba 60 dadka Mareykanka ay rumeysan yihiin in sababaha ugu weyn ee saboolnimada ay tahay “dadka oo aan ku filneyn wax qabadkooda”. Boqolkiiba 30 keliya ayaa ku eedeeyey duruufo ka baxsan xakamaynta qofka, halka inta soo hartay ay u maleeyeen inay tahay mid la isku daray ama aan la hubin.
Halkan waxaa ah liis ay ku qoran yihiin qodobo iyo waxqabadyo kordhiya heerka saboolnimada qofka
Inaad ku dhegto dabin deyn darteed quus awgeed
Iska daynta Deymaha waaweyn
Dareemid awood la'aan si aad wax uga beddesho wax ku saabsan dhibaato dhaqaale
Bixinta naftaada marka hore micnaheedu waa gelinta qayb ka mid ah jeeg kasta akoontiga kaydka ka hor inta aan la bixin inta kale si loo daboolo kharashyada
Inaad naftaada bixinayn marka hore. Kharashyo intaadan gelin qayb ka mid ah jeeg kasta koontada kaydka.
In Farxadda Maanta La Hor -mariyo Baahiyaha Maaliyadeed Ee Mustaqbalka
La'aanta Sanduuq Degdeg ah.
In aan mudnaanta la siin kaydinta
Ma aha in la hagaajiyo dhaqaalahaaga tusaale ahaan in aan la isticmaalin hal-abuurkaaga iyo xirfadahaaga fikirka muhiimka ah si aad u hesho oo u hirgeliso beddello badan oo wax-ku-ool u ah kharashyada maaliyadeed.
Kharashaad aad u badan xagga guryaha
Aan lahayn qorshe lacag.
Inaad garan weydo meesha lacagtaadu hadda ku socoto waxay u horseedi doontaa inaad u weeciso dhanka loo arko inay wax badan qabanayso taas oo inta badan si kale u soo baxda.
Aan kala saarin rabitaanka iyo baahiyaha
Aan haysan shahaadooyin ama tababar u sameeya shaqooyin mushahar fiican leh.
Mudnaanta koowaad siinta maalgelinta alaabta si aad naftaada u maal gashato.
Isku dayga inaad dhaqso u taajirto
Aan ku dheganayn miisaaniyad.
Aan qorsheyn xisaabtaada bangiga.
Iibsashada hantida qiimo -dhaca.
Rabitaan la'aan in la iska dhaafo/loo huro baahi degdeg ah mid kale.
Isku dayga inaad haysato waxyaabo aad u dhakhso badan
Ku bixinta lacag ka badan inta aad kasbato/sameyso.
Dhab ahaantii, qof kastaa wuxuu leeyahay awood uu ku noqdo hantiile. Si kastaba ha ahaatee, tagitaanka halkaas waxay u baahan tahay isku-darka geesinimada, aqoonta, dadaalka, go'aan qaadashada caqliga leh, iyo xoogaa dulqaadasho ah.
Ma jirto hab hubaal ah oo lagu hodmo habeenka, laakiin waxaa jira qaabab la tijaabiyey oo run ah oo loogu uruuriyo maal waqti ka dib.
Qorsheyso oo dajiso hadafyada
Ha ku qarashgareyn/qarash garayn wixii ka baxsan dakhligaaga.
Abuur durdurro badan oo dakhli ah
Akhri oo naftaada baro aqoonta maaliyadeed iyo mabaadiida
Ka fogow cilaaqaadyada sunta ah adiga oo ku hareeraysan naftaada dhiirrigelin, togan, xiise leh, waxtar leh, iyo dad kara.
Ha ku mashquulin is-hadal aan wanaagsanayn, noqo mid rajo leh!
Ku noolow hab -nololeed maaliyadeed oo caafimaad qaba.
Saboolnimadu waa dhibaato aan ku koobnayn waddammada oo keliya laakiin adduunka oo dhan. Tirakoobyada Bangiga Adduunka ee 2015 ayaa sheegaya in in ka badan 700 milyan oo qof ay ku noolyihiin wax ka yar $ 1.90 maalin kasta. In kasta oo ay tahay tiro naxdin leh, (1990, waxay ka badnayd bilyan) taasi wali waa tiro aad u tiro badan.
Tirada la sheegay waxaa sidoo kale ku jira faqri aad u daran oo ay Qaramada Midoobay ku qeexday “xaalad lagu garto in si weyn loo yareeyo baahiyaha aasaasiga ah ee aadanaha, oo ay ku jiraan cuntada, biyaha la cabo ee nadiifta ah, tas -hiilaadka fayadhowrka, hoyga, caafimaadka, waxbarashada, iyo macluumaadka. Keliya kuma xidhna dakhli laakiin sidoo kale waxay ku xidhan tahay helitaanka adeegyada. ”
Sababaha dadku ugu saboolsan yihiin adduunka waxaa ka mid ah:
Akhri ALSO: 9 Siyaabood oo Aan La Filaynin Oo Lacag Lagaga Sameeyo Twitter -ka 2021 -ka
Si aad uga dhexmuuqato suuqa, waa inaad haysataa xirfado ku habboon oo si fiican u bixiya qaybintaan. Tani waa kiiska maxaa yeelay dakhligaagu waa natiijada tooska ah ee xirfadahaaga.
Miyaad ka fikirtay sababaha dhakhaatiirta, qareennada, injineerada, iyo xirfado kale oo badan looga baahan yahay inay sannado badan ku qaataan jaamacad, waa sababta oo ah waxay u baahan yihiin inay bartaan oo farsamadooda si fiican u bartaan.
ARAG SIDOO KALE: 25 Xirfado Sharci ah oo Guriga Lacag Ka Helaya 2021
Luqadaha adkaysi ayaa ah “u soco ilaa laga helo”, “ha quusan” “kuwa joojiya waligood ma guulaystaan, kuwa guulaysta waligood ma joojiyaan”, iwm.
Waxaa jira odhaah ah marka socodku adkaado, kan adag ayaa sii socon doona taasina waa waxa aad u baahan tahay inaad ka korto sababaha saboolka saboolnimadu u sii jirto.
Tusaale ahaan, waxaa la sheegaa in shaqsi lagu yaqaan dulqaadka marka qofku uusan si fudud uga quusan inuusan ka tagin ee uu sameeyo shaqo adag, dadaal, waqti, iyo dulqaad si uu u barto xirfad dakhli sare leh, ganacsi u dhiso, iyo ku guulaysta.
LA XIDHIIDH BADAN: 25+ Ganacsiyada Yar Yar ee Ugu Faa'idada Badan 2021 | Talada Khabiirka
Ma xuma in aad damacdo in aad si dhaqso ah oo taajir ah ku taajirto laakiin waxay xumaanaysaa markaad jarayso geedaha oo aad ku mashquusho nooc kasta oo shar ah si aad u hubiso inaad taajir noqoto. Hal shay oo aadan illoobin ayaa ah in lacagta lagu helay habkan ay tahay dabin iyo dabin.
Waa inaad ogaataa in waqti iyo dulqaad loo baahan yahay si loo dhiso hanti waarta.
Mid ka mid ah sababaha ay dadku saboolnimada ugu sii jiraan ayaa ah inay u dhiibaan iibsashada kicinta iyo wax badan.
Tusaale ahaan anshax -darrada maaliyadeed ayaa ah iibsashada waxyaabo aan ku jirin miisaaniyadda isla markaana aan degdeg loogu baahnayn.
Daawaynta anshax-darrada maaliyadeed ayaa ah barashada farshaxanka is-xakamaynta maaliyadeed iyo ka-hortagga rabitaanka inaad wax ka iibsato waxa laga yaabo inaad rabto xilligan xaadirka ah.
WAA IN AAD AKHRISO: 15ka Dariiqo Ee Ugu Sareeya Dadka Danyarta Ah Waxay Isku Dayaan Inay U Muuqdaan Qani
In lagu eedeeyo kuwa kale khalkhalkaaga dhaqaale waa mid ka mid ah sababaha saboolka saboolnimadu u sii jirto.
Waxaa jirta oraah baaxad leh oo ah marka aad qof farta ku fiiqeyso, in afartaada farood ee kale ay kuu tilmaamayaan. Taas micnaheedu waa inaad adigu tahay naqshadeeyaha waxa aad rabto in noloshaada maaliyadeed u ekaato waana waajibkaaga inaad mas'uul ka noqoto noloshaada maaliyadeed.
Adiga ayay kugu xiran tahay inaad joojiso ciyaarta eedda leh, ogaato khaladaadkaaga oo aad ugu dadaal inaad gaarto hadafyadaada.
ARAG SIDOO KALE: 15 Khaladaad Maaliyadeed Ee Ugu Weyn Dadku Sameeyaan
Hal -abuurka caanka ah ee taga, shimbiraha baalasha ayaa si wada jir ah uga ciyaara halkan.
Tusaale ahaan inaad haysato shirkad maaliyadeed oo khaldan waxay kugu xeeran tahay dad dad ah oo fikirka ku saabsan maaliyaddu had iyo jeer yahay mid xun (pessimists)
Si aad taajir u noqoto, waa inaad naftaada ku hareeraysataa shaqsiyaad dhaqaale ahaan guulaysta si aad u barato siraha guushooda oo aad hirgelin karto oo hodan noqon karto.
Cabsidu waa mid ka mid ah sababaha ay dadku saboolnimada ugu sii jiraan. Shakhsiyaad badan ayaa ka baqa waxa aan la garanayn tanina waa inay dad badan ku noqotaa caqabad weyn.
Wadahadalada lacagtu waxay ku saabsan yihiin qaadista khataraha taasina badiyaa waa meesha cabsidu ka timaaddo laakiin dabeecadda qofka doonaya inuu taajir noqdo maaha inuu ka baqo maalgelinta iyo dhaqaajinta lacagtu laakiin waa inuu maalgashado oo qaato khataro xisaabeed.
La'aanta hadafyo hami leh ayaa ka mid ah sababaha saboolka saboolku u sii jiro.
Si hadafyada maaliyadeed ay u hirgalaan, waa inaad hubisaa inaadan qalbi jilicsanayn laakiin aad u shaqayso, is-edbinayso, aad diirada saarto, oo aad go'aamiso.
Jidhka bini -aadamku wuxuu rabaa raaxo laakiin nasiib darro, qofna ma taajiro marka la joogo aaggiisa raaxada/sidaas darteed, maanta dhig yoollo waaweyn laakiin waaqici ah!
ARAG SIDOO KALE: 40 Xigasho Awood Leh Oo Ku Saabsan Hadafyada Iyo Dejinta Hadafka | 2021
Bakhaylnimadu waxay leedahay hab ay dhibbaneheeda u dayacdo inay maalgeliso qayb ka mid ah dakhligiisa/dakhligeed halkii ay u adeegsan lahayd inay ku bixiso nafteeda oo dhan.
Si aad uga gudubto damaca oo ah sida la hubo ee looga bixi karo saboolnimada, waxaad u baahan tahay inaad nasato, fuliso qiimaynta maaliyadeed, dejiso hadafyada, oo aad bilowdo kaydinta iyo maalgelinta.
Sababta saboolka saboolnimadu u sii jirto, diirad -saariddu waa mid ka mid ah sababaha.
Tusaale ah diirad -saarid la'aanta ayaa ah inaad ku noolaato iyada oo aan xoogga la saarin waxa aad nolosha ka rabto dhaqaale ahaan.
Waxaa lagama maarmaan ah in diiradda la saaro xagga dhaqaalaha iyo sida ugu dhakhsaha badan sababta oo ah waxaa jira waxyaabo badan oo carqaladeeya nolosha sida marka maqnaanshaha diiradda la saaro adkaysiga, gaaritaanka riyooyinkaaga maaliyadeed waxay noqon doontaa mid aad u adag in la dillaaco.
Sida la yiri, haddii aad u malaynayso in waxbarashadu tahay mid kharash badan, isku day jaahilnimada, sidoo kale waa helidda aqoonta maaliyadeed. Hantida iyo hodantinimadu waxay u hoggaansamaan mabaadi'da mabaadi'danna waxay khuseeyaan oo keliya marka la yaqaan. Arrintan awgeed waa inaad hubisaa inaad ku kasbato aqoonta maaliyadeed buugaag ku saabsan sirdoonka Maaliyadeed, seminaarro ku saabsan maaliyadda, iwm.
Waa maxay shanta (5) dariiqo ee lagu soo afjari karo saboolnimada adduunka oo dhan?
Waxaad ku joojin kartaa saboolnimada adoo siinaya waxyaabaha soo socda; Tayada waxbarashada, Helitaanka daryeel caafimaad, biyo, iyo fayadhowr, amniga dhaqaalaha, ka qaybgalka carruurta
Sideen u hagaajin karaa maskaxda fakhriga?
Si aad dib ugu soo celiso maskaxda faqriga, waa inaad samaysaa waxyaabahan soo socda: Raadso lataliye, Ka fogow dadka taban, Samee Dabeecadda Mahadnaqa, Bilow Samaynta Qorshe, Samee Qorshahaaga Ficil, Ka Go'an Inaad Noloshaada Quruxdo, Noqo Mentor
Waa maxay sanduuqa kaydka degdegga ah?
Sanduuqa keydinta degdegga ah waa koontada keydinta ee ay shaqsiyaadku u adeegsadaan inay ku qabtaan lacag caddaan ah oo dheeri ah haddii ay dhacdo kharashyo lama filaan ah oo aan dib loo dhigi karin.
Waxaa jira dhowr sababood oo saboolka saboolku u sii jiraan saboolnimada iyo ballanqaadkayaga inaan ku siinno ilo iyo macluumaad ku saabsan sirdoonka maaliyadeed waxaan ku ogeysiinnay waxyaabaha sababa in qoysaska saboolka ah ay ku dhegaan faqriga, sababta ay saboolka u sii sabool yihiin, sida ka taajiraan saboolnimada iyo sababaha ay dadku saboolnimada ugu sii jiraan.
Haddii aad ku dadaali karto inaad ku tababarto wax kasta oo aan halkan kugu ogeysiinnay, waxaan hubnaa inaad mar dambe noo mahadcelin doonto…
sefisoft.com -14 Sababta Sababta Dadku Saboolnimada Ugu Jiraan | Maya# 6 Way Ku Naxdin doontaa
paper.ssrn.com - Maxay Dadku Sabool u Ahaadaan?
naxariis.com - Waa Maxay Sababaha Ugu Weyn ee Saboolnimada?
reliefweb.int - 11 Sababood ee Sababaha Saboolnimada Adduunka
Humanrightscareers.com - 10 Sababaha Sababaha Saboolnimada Sababa
blog.hocking.edu - Sideed uga gudbi kartaa Caqabadaha Saboolnimada?
Hel Qorsheyaal Degdeg ah oo Taajir ah 2021 | Hubso Lacag mar walba
Intee in le'eg ayaan u baahanahay inaan si raaxo leh uga fariisto 2021
21 Waxyaabood Oo La Sameeyo Marka Lagu Caajisto Shaqada | Iskuday Hadda!
Markaa, aan dhahno waxaad shaqada ka xirtaa 5 -ta galabnimo maalin kasta. Si kastaba ha noqotee, maanta, waxaad tagtay…
Shirkado badan ayaa si fudud u codsan doona lambarkaaga kaarka Lambarka Bulshada sababtoo ah waa hab degdeg ah oo fudud…
Tobankii sano ee kasta waxa uu leeyahay buugaagtiisa ugu fiican. Waad garanaysaa waxa aan ka hadlayo, buugaagta taagan...
Sida Loo Iibsado Kaydad Bilaa Dilaal Ah 2022 | Tusaha Khubarada
Iibsashada kaydka ayaa hubaal ah inay tahay hab fiican oo aad lacagtaada ku maalgeliso, isla marka hore aad taas samayso,…